Fivahiniana tsy ara-dalàna : Pakistaney 12 lahy voasambotra | NewsMada
Fivahiniana tsy ara-dalàna : Pakistaney 12 lahy voasambotra
Sivy voasambotra teny Antaninarenina, ny talata teo. Telo hafa koa voasambotra tao amina hotely iray teto an-drenivohitra, omaly. Samy teratany pakistaney izy ireo. Tsy ara-dalàna ny fipetrahan’izy ireo eto”, hoy ny polisin’ny ”surveillance du territoire”.
Tohin’ny lahatsoratra izay efa navoaka teto omaly ary araka ny tebitebin’ny maro, nandray ny andraikiny avy hatrany ireo polisy avy ao amin’ny ”surveillance du territoire” mikasika ireo teratany vahiny nahabe resaka eto an-drenivohitra. Araka izany, hatramin’ny afakomaly sy omaly, nahatratra 12 ny isan’ireo teratany pakistaney voasambotry ny polisy teto an-drenivohitra. Tena antony nisamborana azy ireo ny fipetrahana tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Araka ny fanazavan’ny polisy avy ao amin’ny surveillance du territoire, tsikaritra fa marobe ireo vahiny mivezivezy eto an-drenivohitra toy ny eny Antaninarenina, Analakely, Behoririka ary manatona ireo olona mpitondra fiara ka mody mivarotra finday izay nampimenomenona sy nampitaraina ireo lasibatra satria zavatra tsy tena izy ny amidin’izy ireo. Nandray andraikitra ny eo anivon’ity sampandraharaha ity tamin’ny alalan’ny fanaraha-maso ny toerana voalaza ary nidina ifotony nijery ireto teratany vahiny ireto. Hita tokoa fa teratany pakistaney no tena betsaka ary ”visa” resaka fizahantany ny taratasy fahazoan-dalana hita teny amin’izy ireo nandritra ny fisavan’ny polisy.
Mbola misy hafa…
Nanamafy ny talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, ny kaomisera Rabialahy Jean Rostand fa teratany pakistaney avokoa ireto tratra ireto ka ireo tratra ihany no nanondro ireo namany sasany. Tsy ireo dahalo izy rehetra fa mbola mitohy ny fanadihadiana hahafantarana ny tena marina. ”Ny ankamaroany mba tsy hilazana hoe izy rehetra, olona tsy tokony hiasa eto Madagasikara satria visa momba ny fizahantany no nidirany eto kanefa manao asa tsy mifanaraka amin’ny antontan-taratasiny izy ireo”, hoy izy. Tsy mijanona amin’ny toerana iray izy ireo. Tsy mbola tapitra ny ”visa”-n’izy ireo kanefa efa manao asa hafa toy ny fivarotana finday izy ireo. Mivarotra finday, araka izany, ny tena ataon’ireo teratany pakistaney ireto. Mbola hita tany amin’izy ireo nandritra ny fisavana nataon’ny polisy ny finday vaovao sy efa niasa maromaro.
Tsy vao izao no nahitana teratany mody miafina ao ambadiky ny hoe manao fizahantany nefa nony tonga eto lasa manao asa hafa ny sasany amin’izy ireny. Raha tsy izany indray, manao fihetsika mamoafady amin’ny tovovavy na ankizy tsy ampy taona eto amintsika.